Switzerland: Switzerland, TELES RELAY
ACCUEIL » International Iswiiska: Switzerland gudaheeda
Iswiiska: Switzerland gudaheeda
MAJ: Ugu dambeyn, moratorium waxay u muuqataa in la joojiyay : « Mawaadiic kama jirto mawduucan » ayaa sheegay in Golaha Dawlad Goboleedka Vaud, oo ka hor imaanaya ereyada Wasiirka Jacqueline de Quattro.
Laga soo bilaabo dhowr bilood, dooddu waxay ku shaqeyneysaa gudaha Switzerland agagaarka antennas 5G, oo ka hooseysa astaamaha dhibaatooyinka caafimaad ee la xidhiidha hirarka ay soo saarto antennas.
Mawduucu wuxuu cambaareeyaa warbaahinta maxaliga ah, waxaana la soo nooleeyay dhowaan iyadoo lala kaashaday kaaliyaha kaaliyaha dhalinyarada ah (Marvin Grimm) oo bilaabay codsi codsashada moratorium ku wareegsan 5G. Ninkuna wuxuu xaq u leeyahay inuu ololihiisa ku dhawaaqo mawduucan caanka ah (« Cilmi-baarayaasha 250 ee ka soo jeeda dalalka 40 ayaa saxiixay codsi ay u gudbiyeen WHO iyo UN-ka oo ka digaya shucaaca raadiyaha ka yimid tiknoolajiyada wireless ») si joogta ah uga soo qaadatay 2015 warbaahinta sida ugu dhakhsaha badan ee aan uga hadalno teknoolajiyada wireless, gaar ahaan agagaarka AirPods dhawaan, iyo in aan waa la cambaareeyaa si sax ah dhowr toddobaadyo ka hor. Waqtiga qorista, horay ayaa loo soo ururiyay 54 438 iyo lambarku waxa uu kor u kici doonaa.
Bogga, Yaa ka taxaddaraya inaanan ilaha ilaha siinin eedeymahaas, waxaan si gaar ah u akhrin karnaa:
Maxay yihiin khatarta 5G?
• Dhibaatada ka maqan,
• Madax xanuun,
• Indhaha indhaha,
• kacsanaanta dareenka,
• Daal joogta ah
• Cudurrada faafa ee soo noqnoqda
• Cudurada hurdada
• Kufsi la'aan
• Saamaynta xun ayaa lagu soo waramey shimbiraha, jiirka iyo jiirka, cayayaanka (beeska, dhirta, duqsigu) iyo sidoo kale gooryaanka nematode iyo bakteeriyada.
Hay'adda Caafimaadka Adduunka (WHO) ayaa soo saartay tiknoolajiyada raadiyaha "sida macquulka ah ee kansarka suurtagalka ah ee dadka"
Marka hore ee cadaadiska caan ah (populist?), Guddiga Gobolka ee gobolka Vaud ee Vaud ayaa sidaas darteed go'aansaday on moratorium ah« ilaa Xafiiska Federaalka ee Deegaanka uu dhammeeyo khataraha suurtagalka ah ee 5G », go'aanka ay taageerto mawqifka Greens ee xallinta, aad u firfircoon dalka. Xilligan, Go'aanka ayaa u muuqata mid ku cusub Yurub (iyo inta kale ee dalka Switzerland), halkaasoo loo diro si tartiib tartiib ah, laakiin qaar ayaa horeba uga baqanaya saameynta barafka.
Waa in la sheegaa in Dadku inta badan way liidataa mowjadaha electromagnetic guud ahaan, mawjado badan oo lafdhabarta ah (UV, raajada, Gamma) iyo hirarka aan lafdhabarka ahayn, oo loo isticmaalo in ka badan qarniga raadiyaha, TV, radar iyo dhawaanahan, telefoonka gacanta. « Aqoonta sayniska ee laga helayo aaggan hadda way ka buuxsantahay marka la heli karo kiimikooyinka badankood » xitaa xusuustaa WHO, kaas oo sidoo kale garaaca kulaylka iyo qabowga adoo dejinaya mowjadaha sida « kansarka suurtogalka ah ee bini-aadanka », a kooxda taas oo mid waliba laga helo qaxwaha ama nijaarnimada.
Si kastaba ha ahaatee, 5G waxay isticmaashaa jadwal isku mid ah 4G hadda oo aan soo bandhigin « risque » supplémentaire sur ce plan. La Suisse fait même partie des pays où la réglementation est le plus sévère en terme de puissance d’émission (4 à 6 volts par mètre (V/m), soit 10 fois moins que dans le reste de l’Europe). Comble de l’ironie, Miisaaniyadan oo lagu soo rogay Gobolka Vaud wuxuu xaqiiqdii codsaday in ka badan dhammaan ... by ay wadayaasha! Sababtoo ah heerarka ugu hooseeya, waxay isu arkayaan inay waajib ku tahay inay ku rakibaan antennas badan oo ka badan deriskooda Yurubta. « Waxaan jeclaan lahaa in la qiimeeyo xadka qoran yihiin at 20 V / m [...] In magaalooyinka ka, waxaan hadda waa horeba 90% ka mid ah arrinta awoodda our, ka dhanka ah 70% baadiyaha. Haddii xadka taxaddar for anteenooyinkooda telefoonka gacanta ee ciidamada ee Switzerland kuma haboona, waxaan u kordhin doonaa tirada anteenooyinkooda. Ma jirto doorasho » adkeeyey dhowaan wargeyska Le Temps Hugo Lehmann, khabiir ku ah shabakadda moobaylka. Taasina waa sababta Xafiiska Fedaraalka ee Deegaanka (FOEN) uu ka shaqeynayo mawduuca waana in uu soo gudbiyaa warbixinta xagaaga.
Haddaba xaggee mawduucyada doodahaani dhab ahaantii ka yimaadaan, xusuusin munaasabadda ololaha ka hortagga mawjadaha ee ku yaalla Linky ee Faransiiska? « Raadiyaha, teleefishinka, mikrodhegyada, casriga ah ... Doodda ku saabsan 5G, waa isticmaalka sii kordhaya ee qalabka farsameynaya hirarka electromagnetic ee la is waydiiyo. Invisible and omnipresent, kakan si ay u sharaxdo, iyada oo mar waliba bulsho caafimaad qabta, mawjadahaas waxay noqdeen "musharaxa ugu fiican ee loogu talagalay sharkiyada » ayuu yidhi Anne Perrin, oo ka mid ah qorayaasha buugga « Meelaha elektromagnetic, deegaanka iyo caafimaadka » in Echos mawduuca, oo sidoo kale faragalin ku sameeya doodda Faransiiska. « Iyada oo laga jawaabayo filayo sare ee dadweynaha, "dadaalka cilmi-weyn lagu sameeyey," ayuu yiri khabiirku. In ka badan soddon sannadood ee la soo dhaafay, oo ku saabsan 25.000 articles cilmiyeed lagu daabacay on saamaynta "radiation non-ionizing" sida ay u yeedheen. »
Marka la soo gaabiyo, sida ayeeyada ugu soo noqotey ayeeydeyda, khatarta 5G ee caafimaadku waxay noqon doontaa mid aad u muhiim ah haddii aad ka gudubto sanka waddada ku jira casrigaaga iyo hoos u dhicida dhawaaqa dhegaha weyn ...
===> Qoraalo badan oo ku saabsan SWITZERLAND halkan <===
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.mac4ever.com/actu/142658_en-suisse-l-etat-de-vaud-suspend-l-installation-des-antennes-5g-le-nouveau-linky
Morocco: Morocco waxay martigalisaa bandhig weyn oo ah sawirro sawirqaade
Bouteflika, ninkii jecel Afrika
Maraykanku wuxuu adkeeyaa codkiisa ka dhanka ah Iran, qiimaha saliidda ayaa kor u kacaya
23H RTL 22 April 2019 - VIDEO
Wuxuu ogaadaa kansarka, sababtoo ah qaniinyo qani ah
Youtube: Haweenka ciyaartoyda ugu quruxda badan
Weeraro ka dhacay Sri Lanka: waa waddan oo horay u baroorta dhibbanayaasheeda - New York Times
Cameroon - Job Offers88
aan caadi ahayn13
DADKA & LIFESTYLE3,120
DIB U EEGID3
DIB U EEGID AFRICAN PRESS26
Galmada iyo xiriirada8
JOOJTADA BLABLA CAM1
Video dheeraad ah658